Marawaxadaha dabaysha ee bilaa biiblaha ah ayaa isbedel ku keenaya cusboonaysiinta | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | | Awoodda dabaysha
Qoraal hore waxaan uga hadlaynay dhibaatada qashinka ay soo saaraan maraakiibta marawaxadaha dabaysha beeraha dabaysha. Mustaqbalka dhow waa in la daaweeyaa in ka badan 4.500 garbaha oo ka faa'iideysta qalabkaas.
Si looga fogaado saamaynta ay garguhu ku leeyihiin shimbiraha, saamaynta muuqaalka ah, ku keydso walxaha lagana ilaaliyo abuurista qashinka, mashaariicda marawaxadaha dabaysha oo aan lahayn garbaha. Sidee ayay marawaxadaha dabayshu u soo saari karaan tamar dabaysha iyada oo aan lahayn qalliin?
1 Mashruuca Vortex Bladeless
2 Astaamaha marawaxadaha dabaysha
3 Faa'iidooyinka marawaxadaha dabaysha
Mashruuca Vortex Bladeless
Mashruucani wuxuu isku dayayaa inuu u xuubsiibto marawaxadaha dabaysha 3-baloodh ee hadda loo adeegsado marawaxadaha dabaysha aan lahayn garbaha. Haddii ay jirto wax shaki ah oo ku saabsan, marawaxadaha dabaysha ayaa awood u leh inay soo saaraan tamar la mid ah kuwa caadiga ah, laakiin ay ku keydsan yihiin kharashyada wax soo saarka ayna iska ilaalinayaan saameynta ay ku leeyihiin aaladaha.
Maaddaama aysan lahayn garbaha, habka loo abuuro tamarta iyo sidoo kale qaab-dhismeedkeeda iyo naqshadeynta ayaa gebi ahaanba ka duwan kuwa hadda jira. Kuwa ka masuulka ah mashruuca Vortex waa David Suriol, David Yáñez iyo Raúl Martín, wada-hawlgalayaasha shirkadda Deutecno.
Hoos u dhigista garbaha waxay bixisaa faa'iidada keydinta qalabka, gaadiidka, dhismaha, kharashka dayactirka iyo sidoo kale waxay soo saartaa 40% tamar ka badan isla lacagta lagu maalgeliyo kuwa caadiga ah.
Tan iyo 2006, markii la soo bandhigay rukhsaddii ugu horreysay ee nashqadeyntaan, waxaa laga shaqeeyay sidii loo hagaajin lahaa marawaxadahaas dabeylaha ah. Si loo tijaabiyo wax-ku-oolnimada iyo wax-ku-oolnimada soo-saarista tamarta, tuneel dabayl ah ayaa la dhisay si loo tijaabiyo loona ekeysiiyo xaqiiqda. Waa la cadeeyay marawaxadaha dabaysha noocooda ah oo dhererkiisu yahay 3 mitir.
Astaamaha marawaxadaha dabaysha
Qalabkani wuxuu ka kooban yahay silsilad toosan oo adag, oo ku xeran dhulka iyo cidda leh qalabka waa piezoelectric. Waxaan xasuusnaa in qalabka loo yaqaan 'piezoelectric' uu u beddeli karo walaaca farsamada koronto, korontaduna u beddeli karto gariir farsamo. Quartz waa tusaale ka mid ah kareemka loo yaqaan 'piezoelectric crystal'. Kadibna, tamarta korantada waxaa ka dhalanaya cilladaha ay qalabkaasi ku dhacaan marka ay la jaan qaadayaan dabaysha. Si la fahmi karo, waxay u shaqeysaa sidii inay ahayd fiidmeer kubbadda baseball foorari, foorari, iyo lulid.
Waxa marawaxadaha dabayshu isku daydo inay gaarto waa inay ka faa’iideystaan Von Kármán saameyn ku yeelashada dariiqa. Wadada loo yaqaan 'von Kármán vortex' waa qaab soo noqnoqonaya oo isbeddello eddy ah oo ay sababaan kala-joogsasho la'aan istaagga lakabka dareeraha markay ka gudubto meydadka. Saameyntan, marawaxadaha dabayshu dhinac ayey uga wareegi karaan dhinaca kale si ay uga faa'iideysato tamarta firfircoonida ee la abuuray oo ay markaa ugu beddesho tamarta korantada.
Faa'iidooyinka marawaxadaha dabaysha
Faa'iidooyinka qaar ka mid ah marawaxadaha dabaysha cusubi waa:
Ma abuuraan buuq.
Ma farageliyaan shucaacyada.
Qiimaha hoose ee alaabada iyo isku imaatinka.
Qiimaha dayactirka oo hooseeya.
Waxay yareysaa saameynta deegaanka iyo saameynta muuqaalka.
Waxtar badan. Waxay soo saartaa tamar nadiif ah oo jaban.
Waxay ku shaqeysaa xawaare badan oo dabeyl ah.
Waxay ku fadhiyaan dusha yar.
Shimbiraha ayaa ka badbaada inay ku duulaan hareerahaaga.
Raadinta kaarboonku waxay hoos u dhacday 40%.
Waxay ku habboon yihiin dhirta xeebta sababtoo ah fudeydkooda rakibidda iyo dayactirka.
Kacaankan tamarta dabaysha, suuqyadu waxay kordhin doonaan keenista marawaxadahaan cusub ee dabaysha kuwaas oo keydinaya kharashaadka isla markaana ilaalinaya isla dhalinta korantada. Rakibaadda tijaabada oo buuxda ayaa la dhammaystiri doonaa dhammaadka sanadkan, kaas oo lagu dari doono tamarta qorraxda si loo xoojiyo guryaha ku yaal Hindiya.
Intaa waxaa dheer, mashruucu wuxuu taageero ka helay Repsol iyo laba iyo toban kale oo maal-gashadeyaal gaar loo leeyahay ah kuwaas oo doorbiday horumarinta tamarta dabaysha iyo hal-abuurnimadan kacaanka ah. Qiimaha suuqa ayaa noqon lahaa qiyaastii 5500 euro oo ah marawaxadaha dabaysha sare ee 12,5 m. Laakiin hadafku waa in la dhiso Vortex 100-mitir ah sanadka 2018, maaddaama ay sare u kacdo marawaxadaha, waxqabadka badan ee uu yeelanayo iyo abuurista tamar badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Awoodda dabaysha » Marawaxadaha dabaysha ee bilaa biraha ah